Maxaa Somaliland looga dayan karaa? | allsanaag
Maxaa Somaliland looga dayan karaa?
Websityada Koonfurta Soomaaliya, kuwa SNM iyo kuwa Puntland ee mucaaradka ku ah Madaxwyne Gaas, ayaa maalmahan soo qoray ” Dimoqraadiyadda ka jirta Somaliland maxay Puntland kaga dayan kartaa. Su’aashan jawaab ma leh, oo ma jirto dimoqraadiyad ka jirta Somaliland oo ah hal qof iyo cod.
Laakiinse waxa xaqiiq ah in maamulka Somaliland ku taagan yahay oo ku shaqeeyo gacan ka hooris ay ka helaan dalal shisheeye iyo Ha’yado caalami ah.
Tusaale, maalin dhowayd Markab sida 28, 000 oo neef oo ari, una dhigata lacag gaaraysa dhowr iyo laabatan Milyan oo doolar ayaa laga soo celiyey dalka Sacuudiga. Ilaa hadda ma jiraan dad warbaahinta taagan oo leh waa cayrownay ee ha nala soo gaaro ama kaalmo waydiisanaysa Bulshada caalamka oo ka soo jeeda Puntland
Somaliland, sidan oo kale mar ay ku dhacday oo Xoolo Berbera laga diray lagu soo celiyey xoolahaas oo ka yaaraa sideed kun oo neef, qaylo dhaan ayeey ka wareegeen.Ilaa reer kasta oo Isaaq ah qaaraan lagu xukumay. Markii danbe waxa laysu keenay 6667 neef
Nin Xoolo dhaqdaa oo reer Puntland ah marna kuma dayanayo nin Ukun dhaqda oo Gabiileey iyo Arabsiyo jooga
← Madaxweynaha Dowladda Puntland oo Salaada Ciidul Adxaa La tukaday Shacabka Casimada Garoowe. l’o kashiftay Tuug dhuumanayey →